Hivij_pro ကို အသုံးချပြီး Inject And Admin Login Access ရအောင်လုပ်နည်း | Myanmar Black Hacking
2 Hivij_pro ကို အသုံးချပြီး Inject And Admin Login Access ရအောင်လုပ်နည်း
အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ကျူတိုရီရယ်လေးကတော့ sql injection attack မှာ hivij pro နဲ့ inject လုပ်နည်းဖြစ် ပါတယ်....Hivij pro ရဲ့အားသာချက်ကတော့ Error bas,MySQL Error,Time base,Oracle အစရှိတဲ့နည်းတွေ နဲ့ ပါ inject လုပ်လို့ရပါတယ်...Free version ထက်သာတဲ့အချက်ပေါ့....အောက်က အဆင်ပြေမယ့် လင့်မှာ အရင်ဆုံးဒေါင်းလိုက်ပါ..
ဒေါင်းပြီးသွားရင် Rar file ဖြည်လိုက်ပါ...
hivijkey.lic ဆိုတဲ့ဖိုင်ပါတွေ့ရမယ်...Hivij ကို install လုပ်လိုက်ပါ... Register ကိုနှိပ်
Name နေရာမှာ Cracked@By.Exidous ကိုထည့်ခုနက လိုင်စင်ကီးဖိုင်ကိုရွေးပေးပြီးရင်အိုကီပြဗျာ....
General tab မှာ Try diffrent----- ကိုအမှန်ခြစ်ပေး..Evasion tab မှာ Replace space with နဲ့ Replacement ကလွဲပြီးကျန်တာအမှန်ခြစ်အကုန်ပေးပြီးရင် စလို့ရပါပြီ...အရင်ဆုံးတော့ vul ဖြစ်တဲ့ဆိုက်ကိုရှာရပါမယ်... ဒါကလည်းကျွန်တော်sql injection မှာရေးပေးပြီးပါပြီ....အခုကျွန်တော်သုံးမယ် ဆိုက်ကတော့...
ok Target နေရာမှာ အဲ့ဒီurl ကိုထည့်လိုက်ပါ...ပြီးရင် start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ....
အောက်ကပုံအတိုင်း database name တွေ့ရပါမယ်.....database ရရင် table ဆက်ရှာကြစို့
table ကိုနှိပ်ပြီး Get table ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ....ပုံ (၁) မှာတွေ့တဲ့ အတိုင်း table တွေကျလာပါလိမ့်မယ်...
အဲ့ဒီ table ထဲကဘာကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးလဲ...(တစ်နည်းအားဖြင့် user နဲ့ pass ရှိနိုင်တဲ့ table)
ကတော့ user ဆိုတဲ့ table ပဲ..တွေ့တယ်မဟုတ်လား....အဲ့ဒါလေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Get colum နှိပ်လိုက်ပါ.. ပုံ (၂) မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း အတိုင်းကော်လံတွေကျလာပါလိမ့်မယ်....
အဲ့အထဲမှာဘာကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးလဲ.... မေးစရာမလိုပါဘူး...Login နဲ့ Password ပဲပေါ့မဟုတ်လား....အဲ့နှစ်ခုကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီးးး Get data နှိပ်လိုက်ပါ....ဟော Admin ရဲ့ user နဲ့ ပတ်စ်ဝက်ကျလာပြီပေါ့....အဲ့ဒီမှာ password က hash နဲ့ကျလာတဲ့အတွက် hash သွားဖြည်ရပါဦးမယ်...
http://www.md5decrypter.co.uk/ ကိုသွားပြီး...MD5 hash နေရာမှာ ခုနက hash ကိုထည့်ပြီး....
Capcha လေးတွေမှန်အောင်ဖြည့်ပြီးးးး Decrypt hash ကိုနှိပ်လိုက်ပါ....Bravo....! You are about to hack admin...
ကဲနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Admin page ရှာရမှာပါ...
Hivij မှာ Find admin ကိုနှိပ် Path to search မှာ http://www.eurocomcenter.eu/ထည့်start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
http://www.eurocomcenter.eu/login.php မှာ200OK တဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်....အဲ့ဒီလင့်ခ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
Damm... F---k admin...
You lost,I win........
shell တင်ပြီး Deface အုပ်လိုက်တာနဲ့ ဒီဆိုက်ကိုသင်ပိုင်သွားပါပြီ...ကိုယ်ဟက်ထားအကြောင်း သက်သေပြချင်တဲ့အနေနဲ့ Mirror လုပ်လိုက်..အိုကီဗျာ..ဒါတွေကို နောက်သင်ခန်းစာ မှာမှ ပြန် တင်ပေးတော့မယ်.....
Cradit- မြန်မာအိုင်တီ လူငယ်များ
စာရေးရပျင်းနေလို့(https://www.facebook.com/ugmhmyanmar) ဒီကပဲယူပြီး ပြန်မျှလိုက်ပါတယ်
Labels: Hacking Tutorials . Knowledge . SQL Injection . SQL Tools
Mon Lay Thwe said...
Download Link က မရတော့ဘူးအကို ထပ်တင်ပေးလို့ရရင်တင်ပေးပါလားအကို
Mar 21, 2016, 4:24:00 AM
link များသေနေပါသည်။ ထပ်တင်ပေးလို့ရရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်အစ်ကို။ အခုမှစလေ့လာနေသောကြောင့်ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်အစ်ကိုတို့ရေ
Sep 29, 2016, 2:04:00 AM